Matenga eGuam anozovhenekera ne fireworks & drone mwenje inoratidza
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Zimbabwe Breaking News » Matenga eGuam anozovhenekera ne fireworks & drone mwenje inoratidza
Kuputsa Kufamba Nhau • Zimbabwe Breaking News • nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Makore makumi manomwe nemanomwe apfuura, chitsuwa cheGuam chakasimuka pamusoro pekuparadzwa kweHondo Yenyika II.
Kufunga nezvesimba nekusimba kwakaratidzirwa nevakuru veGuam, Gavhuna Lou Leon Guerrero neMayor 'Council yeGuam vakadana kupemberera kwegore rino kweGuam's Liberation,' Kontra i Piligru, Ta Fanachu. ' Zvinoreva kuti "panjodzi dzese, tinomuka."
Mukupemberera makore makumi manomwe nemanomwe ekuberekwa kweGuam, Hofisi yeGavhuna uye Guam Vashanyi Bureau (GVB) ichauya yekutanga yeGuam yemagetsi magetsi show, iine 100 quadcopter drones, ichiuya Zuva reRusununguko manheru, Chitatu, Chikunguru 21, 2021.
Zuva reRusununguko Drone Chiedza Ratidza richazoteverwa neatatu panguva imwe chete mafirati ekuratidzira.
Hofisi yaGavhuna uye GVB vanga vachishanda nevatengesi vemuno Bella Wings Aviation uye JamzMedia Productions / ShowPro Pyrotechnics kuunza izvi zvinonakidza zvinowedzera kumhemberero dzeRusununguko dzegore rino.
"Tinofara kupa musanganiswa wakasarudzika wevaraidzo, uye tinotarisira kuti ichashanda sekurudziro inoenderera mberi kune ramangwana rakasimba, rinobudirira pachitsuwa chedu nevanhu vedu," akadaro Gavhuna Lou Leon Guerrero. "Sezvo isu tichirangarira chiwi cheRusununguko rwechi77 kubva mukugara kune dzimwe nyika, mhemberero dzakadzama zvine chirevo nematambudziko ayo mumwe nemumwe wedu akatsungirira nekuda kwedenda re COVID-19."
“Gavhuna Lou neni tinotenda vanhu veGuam nekuramba vari munzira uye zvakare, zvichiratidza kusimba kwenharaunda yedu yechitsuwa munguva dzekutambudzika. Nepo mhemberero dzerusununguko dzichitaridzika zvakasiyana kubva kumakore apfuura, tinotarisira kuvhenekesa denga usiku nezvakawanda kupfuura mafiraya, asi kuratidzwa kwekutanga kweGuam, "akawedzera Lt. Gavhuna Tenorio.
Rerusununguko Zuva Drone Chiedza Ratidza rinotanga na8: 00 masikati neChitatu, Chikunguru 21. Light-up drones inozopenya, kutamba, uye kuyengerera mukuumbwa kwakakwirira pamusoro peTumon Bay kwemaminetsi gumi nematatu uye ichioneka kubva kumakiromita mazhinji kure. Gavhuna Joseph Flores Chirangaridzo (Ypao Beach) Park muTumon ichavharwa kuruzhinji husiku ihwohwo, asi iyo yekuratidzira mwenje yedrone inogona kuoneka kubva chero kupi pamwe neTumon Bay.
Iyo drone show ichateverwa neatatu akawiriraniswa fireworks anotangisa kubva kuOka Point (chipatara chekare), Hagåtña Boat Basin, uye barge kubva kuMalesso 'Pier na8: 15 pm Mutungamiriri wemimhanzi uchaperekedza drone-mwenje uye fireworks inoratidza uye inogona kunzwikwa paBreeze 93.9 FM.
Kana ukarasikirwa nedrone show debut, unogona kubata imwe show kubva kumusha weMalesso 'neChina, Chikunguru 22nd na8: 00 pm Hapana mafirati acharatidzwa usiku ihwohwo. Mutambo wekutevera unenge wakatarisana negomo reMalesso wakananga kuGomo reSchroeder uye unenge uchionekwa mumatunhu eMalesso 'neHumåtak.
“Kana tisingakwanise kupemberera Zuva reRusununguko pamwe nekuungana kwezviuru zvevanhu vedu sezvatinowanzoita, saka tichazongotenderera mudenga usiku nemishumo yekubatana uye tariro kumhuri dzedu panguva iyo nharaunda yedu yese iri kushanda pamwechete kurova hutachiona uhu zvachose, "Mutungamiri weGVB uye CEO Carl TC Gutierrez vakadaro.
Mamwe eTN Nhau paGuam